Wonke umuntu uyazi ukuthi uswidi elula, esihlwabusayo futhi unempilo, kanjalo wathenga ngempumelelo abafundi canteens esikoleni. Its ukunambitheka obucayi, satiety futhi njalo mnandi okukhipha namanzi emgqeni isilinganiso lokuqala imikhiqizo ethandwa iningi kafulawa amabhikawozi nezibaya onguchwepheshe ukubhaka. Curd namanzi, ungaqiniseka qobo pretty elula, futhi iresiphi yabo siqukethe imikhiqizo etholakala. Nokho, chef ngamunye uthola flavour ekhethekile komkhiqizo. Mhlawumbe, ushizi namanzi bamunca into ngubani ubalungiselela. Indlela ukupheka namanzi ekhaya? Ukuze lombuzo zama ukunikeza impendulo eningiliziwe ngokucabangela ongakhetha eziningana Culinary.
ushizi Juicy - iresiphi yendabuko
Inhlama is inkhulumo lelungiselelwe usebenzisa ubuchwepheshe obulandelayo: 2 amaqanda phehla nge ¾ inkomishi ushukela, kwengezwa ibhotela esithambile noma imajarini imali amagremu 100, usawoti, baking soda. On workpiece idinga mayelana 4 izinkomishi ufulawa, kodwa ke, kufanele kuqashelwe ukuthi inhlama kufanele uthole esithambile futhi tender, kungenjalo umkhiqizo akusho ukuthola ukunambitheka oyifunayo. On lemali okuholela inhlama edingekayo 200 amagremu of ushizi, ufulawa (2 wezipuni) neqanda. Inhlama cut imibuthano, umbuthano ngamunye ke ibekwe ku mass curd, onqenqemeni is uvalwe kakhulu ivaliwe. Kubalulekile ukuthi ukugcwaliswa ayikwazi ageleze phezu emaphethelweni amnandi, phakathi okufanayo kungenziwa wangasho "ephaketheni" - kulesi simo, ushizi kuyoba progrevshis ngisho tastier kuhhavini. I ukushuba we tortilla - 5-7 amamilimitha angu, ukubhaka isikhathi eligcotshisiwekuhovini uwoyela baking - imizuzu 10 kuhhavini at 230 degrees. Ngaphambi baking gcoba Iqanda namanzi ukwakha uqweqwe okumnandi. Konke! Kungenzeka ukujabulela!
Mini Juicy: iresiphi "ezinhle Njalo"
Ngokusho abadali leresiphi, cishe akunakwenzeka ukuba lokudlela up. Hhayi-ke, ake wenze lokhu ngesandla kuqala! Inhlama zidinga Omuny 150 g le-bhotela, kubalulekile ukuze ungeze ukhilimu - 50 g Ushukela - 5 wezipuni ufulawa - 3 izinkomishi amaqanda 2. Liphinde ezihlongozwayo ukusebenzisa yashizi lemon elikhuhluziwe (nakhu, imfihlo ukunambitheka esiyingqayizivele) kanye baking powder. Ukuze wenze inhlama Ubuyisé ezithambile ikakhulukazi kanye nje elicibilikile emlonyeni, izithako tente ukuxubana ufulawa nge mixer. I ukugcwaliswa siqukethe 300 amagremu cottage shizi, 100 g ushukela, egg elimhlophe - ukunakwa! - vanilla essence. Nalapha futhi, protein noshukela axutshwa nezinkolelo mixer, bese kuphela ukwengeza ushizi ogayiwe ngokusebenzisa ngesihlungo. Roundels ngoba namanzi okuphekiwe mncane impela - ukuze ukugcwaliswa usephendukele e ithisipuni akuphelele. Athambisa isikhuphasha - futhi phezu bhaka. Juicy - nje ukwanelisa amehlo! Futhi indlela cool ukudla wezinto eziningi kangaka ezinhle ngesikhathi esisodwa!
ushizi Juicy: iresiphi ngezithelo ukugcwaliswa
Manje thina ibeke ushizi ukugcwaliswa bese upheka inhlama kuyo. 200 of ushizi hlanganise amaqanda 3, amagremu 100 ibhotela. Engeza ¾ inkomishi yashukela vanilla. Sibeke ufulawa ukuze inhlama wayengekho cool. Nemthombo kungenziwa kuphekwe ne apula, Persimmons noma iyiphi amajikijolo, izithelo oqoshiwe futhi mix nabo nge kwengcosana kashukela. Kulokhu, kubalulekile ukuba ambumbe namanzi njengoba pasties, singavumeli ukugcwaliswa baphuma ngaphandle. Zonke efanayo amafutha Iqanda - futhi kuhhavini imizuzu 20-25.
ushizi Juicy: iresiphi ukudla okusheshayo
Too ukhathele lokudlela ezungeze izinkomishi encane futhi basakaza ukugxusha? Akunandaba! Juicy zihlukile - ake ukuyibiza ngakho-ke kuyisimangaliso ngesimo cottage shizi ikhekhe, okungase kalula uthathe izingxenye. Inhlama: ibhotela (100 g) plus 2 izinkomishi ufulawa, ababili wezipuni cream, isigamu inkomishi ushukela, soda. Thina unikezele ngezinsizakalo inhlama ibe ikhekhe flat, ingxenye ikhefu yakhe posypku. Ukuze ukugxusha thatha imikhiqizo ezilandelayo: 500 g cottage shizi, amaqanda 3, inkomishi ushukela. Kunanzuzoni lokhu iresiphi - ngakho-ke okuningi toppings, ngakho-ke ukuzuza kakhudlwana. Inhlama kuyo ingumhlabathi ku chips futhi iningi kwasakazeka bhaka ke - the izaqheqhe, kulandele - lonke chips eyatholakala kusukela test. Bhaka imizuzu 40 futhi uthathe tincetu. A option enhle kakhulu zomkhaya omkhulu futhi ngempelasonto.
Waffles iresiphi for okuzenzela
Ushizi ikhekhe ngaphandle baking: esiphundu, kuyashesha futhi kulula
Ukupheka: bayobhaka uphudingi kakhulu
Ladies izibiliboco - ikhekhe zonke iholide
Umuthi 'Finlepsin kuthiye ukukhula ": incazelo, yokusetshenziswa
Inkinga Zokuxazulula Document Ezokuphepha e High Speed Ricoh MFP
Lavash roll nge crab izinti
Ukuhlolwa umfutholuketshezi of amapayipi Ukushisa izinhlelo
I-crossword iyinkokhelo enhle ebuchosheni
Bangaki mathambo ayindlu emzimbeni womuntu wonke